हाम्रो घरपालुवा जनावर र व्यक्ति डोनेस ड्राइभ सामिल हुनुहोस् od विश्वविद्यालयहरू
परिसर जीवन, सामुदायिक कार्यक्रमहरू
हाम्रो समुदायलाई समर्थन गर्नुहोस् र अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्! होजेज युनिभर्सिटीले ह्यारी चापिन फूड बैंक र ब्रूकको लिगेसी एनिमल रेस्क्युसँग मिलेर खाँचोमा परेका परिवार र हाम्रा प्यारो साथीहरूको लागि आइटम संकलन गरेको छ। जून १ बाट - जून १th, २०२० बाट दान गरेर हामीसँग सामेल हुनुहोस्।
तपाईं एक फरक गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाईंको U अनुदान बिल्डिंग U को लोबीमा छोडनुहोस् 4501०१ औपनिवेशिक ब्ल्भिड, फिट। मायर्स, FL 33966।
कार्यक्रमको लागि दान विचारहरू र हाम्रो उडानहरूको लागि तल हेर्नुहोस्।
हेरी चापिन फूड बैंक को लागी दान विचारहरु
क्यान्ड मासु र माछा
फल (कप, क्यान्ड, सुकेको)
मकारोनी र चीज (बक्सि))
तत्काल मॅश आलु
ब्रूकको विरासत पशु बचावको लागि दान विचार
सुख्खा कुकुर खाना
सुख्खा बिरालोको खाना
यातायातका लागि ग्यास कार्डहरू
फ्लाई / टिक मासिक रोकथामकर्ता
रद्दी टोकरी (१ g गैलन)
भारी शुल्क carabiners
क्लोरोक्स / लाइजोल वाइपहरू
बिहान डिश साबुन
मार्टिaleगेल कलरहरू - सबै आकारहरू
गैर-फिर्ता योग्य leashes: १ ईन्च वा अधिक
ढक्कनको साथ भण्डारण डिब्बा
जिपलोक ब्याग: स्यान्डविच, क्वार्ट, वा ग्यालन साइज
सोशल मिडियामा चित्रित हुनुहोस्!
घरपालुवा जनावर दानका लागि, कृपया तपाइँको फोटो पठाउनुहोस्, र तपाइँको पाल्तु जनावर (नाम सहित) taraque@hodges.edu.
खाद्यान्न चन्दा वितरणको समयमा सामाजिक मिडियाको लागि फोटो खिचिनेछ।
प्रश्नहरू? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!
टेरेसा अरकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
कल: (239१598) 6274 XNUMX XNUMX -XNUMX
4501०१ औपनिवेशिक ब्ल्भिड, फिट। मायर्स, FL 33966
टैग: दान ड्राइभ, HodgesU, गो टाढा टाढा रहनुहोस्